Cwangcisa ulindelo ngesiVumelwano sokwamkela | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 22, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Njengomthengisi, mhlawumbi uthembele kuninzi lwezicelo zomntu wesithathu kunye nezixhobo zokuzisa amaphulo akho ebomini.
Ndibhalile ngaphambili malunga nendlela Ukubeka ulindelo kubathengi bakho kuqhuba ukoneliseka kwabathengi… Ikwakhona indlela onokunceda ngayo ukuqhuba ukoneliseka kwakho-wakhe isivumelwano sokwamkela ukuseta ithoni kunye nobudlelwane bakho nomntu wesithathu.
Izivumelwano zokwamkelwa zibeka imigaqo ethile yomdlalo kubathengisi osebenza nabo ngaphambi kokuqala. Izivumelwano zokwamkela ziqulathe izinto ezinje:
Ngubani ophethe ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwiprojekthi.
Ngubani ongumnini wezixhobo (imizobo, ikhowudi, njl.
Nokuba ukulibaziseka okanye ukuhlawulwa kweentlawulo kuya kumiliselwa ukuba umsebenzi awugqitywanga ngexesha elimisiweyo.
Ziya kugqithiselwa nini kwaye njani izixhobo kwimeko apho ubudlelwane buya emazantsi.
Nokuba ngaba umntu wesithathu angadlulisela iprojekthi kwaye asebenze kwezinye iinkampani okanye izixhobo.
Nokuba ngaba umntu wesithathu angawukhuthaza umsebenzi abawenzayo.
Mhlawumbi unezinto ozithandayo nongazithandiyo xa usebenza nabathengisi, ukuhlangana kwangexesha, iikhowudi zokunxiba, amaxwebhu, iifomathi, njl. indlela. Ndingabacebisa!
Ngokufana nesivumelwano sengqesho kunye nabasebenzi bakho siya kuthintela ukungqubana nabasebenzi, isivumelwano sokwamkela sinokuthintela imiba kunye nabathengisi kunye nezixhobo zomntu wesithathu.
tags: ukuhanjiswa kweendabaUphando lwezoPhando
Unxibelelwano 'IHybrid Calling System = Iyamangalisa
Mar 22, 2009 ngo 11:06 PM
Doug, ufunda incwadi yolawulo lweprojekthi? Ngoku, musa ukubhloga ngomso malunga nokuhamba kweprojekthi okanye ndiyazi ukuba ukhona. Into oyithethayo yinyani kwaye nabani na onezakhono ezifanelekileyo zolawulo lweprojekthi uya kukuqonda oku.
Kuvakala kulula ukuyenza, kodwa ayisiyiyo. Ngokukodwa xa iprojekthi ingachazwanga kakuhle ngeziphumo ezinqwenelekayo.
Ndizibonile iingxaki ezinkulu njengawe uthetha ngazo apha ngemizobo ngakumbi. Emva kokuba ziphinde zalungiswa zenziwa iinguqu, ngubani ongumnini wazo? Ukuthatha isigqibo kwangoko kubonakala kungumsebenzi odinisayo kodwa inokusombulula imeko yeengxaki kamva.
Iposti elungileyo, kodwa beka incwadi ye-PM kude! :)
Mar 22, 2009 ngo 11:44 PM
Hayi, andinguye- kodwa bendicinga kakhulu malunga nento ebendibhloga ngayo kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye andicingi ukuba ndichithe ixesha elininzi kwisicwangciso kunye nobunkokeli njengoko bendinjalo iinkcukacha eziphelileyo.
Kananjalo, ngokumiliselwa kolunye uqalo bendisebenza nalo (Iinkqubo zeKoi), Sifuna ukuqinisekisa ukuba yonke idola echithwe inembuyekezo enkulu kuyo. Njengoko ndiqhubeka nokusebenza kule projekthi, ndiza kuqhubeka nokwabelana ngolu hlobo lweengcebiso.
Ndiza kuzama ukuqhubeka ndiyixuba phakathi kwe-macro kunye ne-micro, tho!
Enkosi kakhulu ngengxelo yakho!